THANDAZA KUDE: NGABA KUFANELEKILE UKUBUKELA OKANYE AKUNJALO? - IINKQUBO ZETV
I-Pray Away yifilimu yaseMelika esekwe kumaxwebhu eyayiveliswe yaza yalawulwa nguKristine Stolakis. Uxwebhu lukaKristine lujikeleza
I-Pray Away yifilimu yaseMelika esekwe kumaxwebhu eyayiveliswe yaza yalawulwa nguKristine Stolakis. Uxwebhu lukaKristine lujikeleze abo basindileyo kunyango lokuguqula, kwaye ezinye iinkokheli zangaphambili ziyasokola ngezenzo zazo ngokuchasene nabanye. KwiHollywood, uJason Blum kunye noRyan Murphy ngabavelisi abaziwayo abasemva kwemveliso yemidlalo bhanyabhanya ethi Thandaza.
UBlum udume ngomsebenzi wakhe kwiifilimu ezinjengeWhiplash, Phuma, kunye nabanye, kwaye uphumelele amabhaso aliqela. Ngaphandle kokubaleka ngeSikere, iMemoir, kunye neentliziyo eziqhelekileyo, uRyan Murphy udume ngeefilimu ezahlukeneyo.Thandaza u-Away okokuqala kwi-Tribeca Film Festival ngomhla we-16 kweyeSilimela kulo nyaka kwihlabathi liphela! Kwakungaphambi kokuba iNetflix ifumane ngokusemthethweni amalungelo okufota kumdlalo bhanyabhanya. Umboniso bhanyabhanya ukhutshiwe kwi-AFI Docs.
Ngaba kufanelekile ukubukela uthandaze kude okanye hayi?
I-Netflix's Pray Away franchise iye yathandwa kakhulu ngababukeli. Iitamatisi ezibolileyo zinika u-Thandaza kude ireyithi yokuvunywa yeepesenti ezingama-94 ngokusekwe kuphononongo lwama-32 ngomndilili we-8.40 kwali-10.Ngokwe-aggregator yokuphonononga, u-Pray Away, ifilimu ehlola ingozi ebangelwa yinto ebizwa ngokuba yonyango lokuguqula, yayingumxholo wayo kunye nabaxhasi bayo malunga nokusebenza. I-Metacritic, i-aggregator yokuhlaziywa, inika ifilimu i-71 kwi-100, ngokusekelwe kwiingcamango zabagxeki abathandathu.
Impembelelo yonyango eguqulweyo kubantu abavela kwimvelaphi eyahlukeneyo iphononongwa kule filimu. UJohn Paulk waba yimvakalelo yesizwe emva kokubhengeza ukuba ububekile bucala ubomi bakhe bobufanasini, kwaye uJulie Rodgers wafumana unyango emva kokuya kunina eneminyaka eyi-16 nabo bayabonakala kwifilimu.
Kodwa le mibono ayiyombali. UJeffrey McCall wenza ukubonakala kwakhe kwindawo yokuqala kuThandaza kude. Umfana we-transgender usondela kubantu angabaziyo kwindawo yokupaka iimarike ukubaxelela ngemvelaphi yakhe njengowasetyhini oguqukayo kunye nokukhetha kwakhe ukulandela iNkosi. Nangona bephelelwe lixesha abanokubonakala ngalo, iMcCall yeNkululeko ngoMatshi kunye nentshukumo yabantu abathandana nesini esinye bacebisa ukuba olu tyekelo luyingozi aluyi ndawo nanini na.
Ngokumalunga nombuzo wokuba ufanele ukubukela i-movie okanye cha? Kuya kuba ngcono ukuba ubukele, emva koko. Thandaza u-kude kufuneka ubone ukuba uyayonwabela imiboniso bhanyabhanya. Kubantu abangaqapheliyo, uchungechunge lwe-Pray Away luyafumaneka ukuba lubukele ngokusemthethweni kwi-Netflix, ke ukuba ucwangcisa ukuyibukela, yiya ku-Netflix kwi-movie. Ukuba ubukele imovie, yabelana ngeengcinga zakho malunga nomdlalo bhanyabhanya nathi kwicandelo lamagqabaza apha ngezantsi.
URussell crowe bhanyabhanya
Ngaba kuya kubakho nayiphi na i-Sequel ecwangcisiweyo yokuthandaza kude? Malunga neCast kunye nePloti?
Inkxaso yokuthandaza kude kuye kwaba nzima, nangona ikhutshiwe kutshanje kwiNetflix. Ngenxa yoko, isicelo sokuhlaziya iNetflix sinokuvunywa. INetflix kusafuneka ibhengeze imovie elandelayo, ke kunzima ukuqikelela iyelenqe, kodwa kukhuselekile ukucinga ukuba uninzi lwabadlali bokuqala bazobuya. Ukuba iNetflix ipapasha naluphi na ulwazi olongezelelweyo malunga nefilimu, siya kukugcina.
umtshato xa uqala ukuwubona
Re: zero ngokulandelelana
Ixesha lasekhitshini elibuhlungu ixesha loku-1
Ukuhlaselwa komhla wokukhutshwa kwonyaka we-titan 2
indawo ezolileyo yokusasaza umhla wokukhutshwa